IGM entsha ye-MacOS Sierra, Microsoft, iDropbox, nokuningi. Okuhamba phambili kweviki kuSoydeMac | Ngivela kwa-mac
IGM entsha ye-MacOS Sierra, Microsoft, iDropbox, nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto kuSoydeMac
UJordi Gimenez | | Apple, I-Mac OS X, Izaziso
Sekusele amahora ambalwa nje ukuthi sifike ngokusemthethweni kohlelo olusha olusebenzayo lwe-Apple lweMacs, iMacOS Sierra 10.12 futhi kuleli sonto kanye naleli lokugcina bathuthwe ngokwethulwa, ukwethulwa nezinye izindaba eziphathelene nesiginesha yeCupertino. I-Apple ithengise kuleli sonto okusha I-iPhone 7, i-iPhone 7 Plus, i-AirPod kanye ne-Apple Watch Series. Ngaphezu kwayo yonke le hardware entsha, ikhiphe izinhlobo ze- IOS 10, i-watchOS 3 ne-tvOS, iqamba isonto eligcwele izindaba zezigidi zabasebenzisi.
Kepha akuphelelanga lapho futhi wukuthi ekupheleni kwaleli sonto eledlule uzakwethu uNacho usazise ukuthi i-Apple yethula abasebenzisi beMac a isibuyekezo esisha se-MacOS Sierra Golden Master. Lokhu kuvuselelwa ngenombolo yenguqulo 16A323 Kwafika ngomzuzu obalulekile futhi lokho ukuthi usuku oluhleliwe lokwethulwa ngokusemthethweni kweMacOS Sierra luhlelelwe umhlaka-20 Septhemba.
Kepha sizoshiya le Golden Master entsha ye-macOS Sierra ukuze sigxile ekutheni kufanele senze kanjani lungiselela iMac yethu ukufaka inguqulo entsha yohlelo lokusebenza i-Apple izoyethula ezinsukwini ezimbili nje kuphela. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukuqala ngakho lesi sifundo esilula okufanele silungiselelwe.
Eyesibili yezindaba ihlobene nenkampani yeMicrosoft ne- ukuhlaselwa kwe-Apple's MacBook Air. Iqiniso ukuthi akuyona inkampani kuphela leyo zama ukwenza "umsindo" ngokuziqhathanisa ne-Apple, kodwa kuliqiniso ukuthi lolu hlobo lwezimpi asikholwa ukuthi luzolungela ezaseRedmond.
Ungawakha kanjani umbukiso wesilayidi omuhle nge-MacOS Sierra? Yebo, yilokhu uJavier Porcar asikhombisa kukho okokufundisa okuncane kepha okuthokozisayo okungaba usizo olukhulu kubasebenzisi. Lapho sesinayo ngokusemthethweni iMacOS Sierra yabo bonke abasebenzisi Sizokukhombisa ngamunye wemisebenzi emisha namanye amathuba wohlelo olusha lokusebenza.
Ekugcineni sikushiya nezindaba ze I-Dropbox nokulawulwa kwayo okungenzeka kwe-akhawunti yethu yomlawuli kwi-Mac. Ngaphandle kokungabaza, kuyinto okufanele uyikhumbule ukuthi kungenzeka nokuthi kunezinye izinketho ezithakazelisayo neziphephile njengefu lika-Apple uqobo, kodwa lokho kukuwo wonke umuntu.
Futhi kuze kube manje isifinyezo esincane samasonto onke, khumbula ukuthi leli sonto elizayo yiviki elikhulu labasebenzisi be-Mac futhi kuwebhu sizogcwala ngakho konke okuphathelene nalokhu kwethulwa okusemthethweni kweMacOS Sierra.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » IGM entsha ye-MacOS Sierra, Microsoft, iDropbox, nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto kuSoydeMac
Ungayisebenzisa kanjani ikhibhodi ye-emoji yokubikezela ku-iOS 10
Ungawathumela kanjani amanothi kwimilayezo ye-iOS 10